လိင်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်အတွက်တရားအားထုတ်ရန်အသိပညာပေးသင်တန်း - ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
လိင်စွဲလမ်း၏ကုသမှုများအတွက်တရားအားထုတ်ပွားသင်တန်း: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2016)
Volume ကို 5, Issue2>
* သတင်းထောက်ရေးသားသူ: ဝီလျံဗန်ဂေါ်ဒွန်; စိတ်ပညာဌာနခွဲ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, Nottinghamshire, NG1 4BU, ဗြိတိန်, E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]တွဲဖက်။uk
အဲဒို Shonin မာကုဃ Griffiths က
ဒါဟာပွင့်လင်း-access ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဆောင်းပါး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, Non-စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်စွဲလေးနက်ဆိုးရွားသောအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိနိုငျသောရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုထိရောက်မှုသုတေသနလက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်ပြီး, ကြားဝင်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားအမူအကျင့် (အဖြစ်ဓာတု) စွဲလမ်းမှုကိုကုသမှုအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အကျိုးဆက်, ဆေးခန်းလိင်စွဲလမ်း၏တိကျသောရောဂါလက္ခဏာတွေပစ်မှတ်ထားကြောင်း လိုက်. ကုသအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတပ်မက်လိုချင်သောအရာဝတ်ထုနှင့်အတွေ့အကြုံများအဘို့အစွဲလမ်းကနေသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ကူညီခြင်းအပြင်အချို့စင်ကာပူဒေါ်လာ-MBIs အထူးရည်ရွယ်ဆင်ခြင်ဆံ့သောကြောင့်, လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်ဒုတိယမျိုးဆက်သတိ-based ကြားဝင် (SG-MBIs) ထိုအဆိုပြုပြီးပါပြီ လိင်နှင့် / သို့မဟုတ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှပူးတွဲမှုအားနည်းစေရန်။ လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်စွဲကုသမှုအတွက်သတိ၏ utility ကိုသို့ပထမဦးဆုံးလက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်။
တစ်ခုက In-depth ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုစင်ကာပူဒေါ်လာ-MBI တှေးတောဆငျခွပွားသင်တန်း (MAT) အဖြစ်လူသိများအသုံးချဖို့ကုသမှုခံယူကြောင်းလိင်စွဲခံစားနေရပြီးတစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးပါဝင်သောကောက်ယူခဲ့သည်။ MAT ၏ပြီးစီးပြီးနောက်အဆိုပါပါဝင်သူဆေးခန်းသိသိသာသာစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးတက်မှုအဖြစ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်လျှော့ချသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ MAT ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလည်းအိပ်ပျော်ခြင်းအရည်အသွေး, အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတွေ့အကြုံများမှ Non-attachment ကိုအတွက်တိုးတက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Salutary ရလဒ်များ6လနောက်ဆက်တွဲမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအမူအကျင့်စွဲကုသမှုအတွက်သတိ၏ applications များရှာဖွေစူးစမ်းစာပေကိုတိုးချဲ့နှင့်တွေ့ရှိချက်များကိုလိင်စွဲကုသမှုအတွက်သတိ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ထပ်မံလက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမျက်ခြေမပြတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
keywords: လိင်စွဲလမ်း, hypersexual အပြုအမူ, ဘာဝနာအသိအမြင်လေ့ကျင့်ရေး, အမူအကျင့်စွဲ, သတိ, စွဲကုသမှု
လိင်စွဲအ Diagnostic ၏နောက်ဆုံးပေါ် (ပဉ္စမ) ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (များတွင်ပါဝင်ဘို့ကိုလက်ခံမခံခဲ့ရပေမယ့်American Psychiatric Association, 2013), အလွန်အကျွံ Non-paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (က "ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorder" အဖြစ် DSM-III ကိုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်American Psychiatric Association, 1987) ။ စွဲလမ်းဆေးပညာထို့ပြင်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း (နှစ်ဦးစလုံး2011) နှင့်ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (10th ed .; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2007) အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်းမှု၏အခြေခံဖြစ်နိုင်ကြောင်းလက်ခံပါ။ လိင်၊ အရွယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု၊ အခွန်အခ (ဥပမာ - လခ၊ လိင်၊ လိင်မှုကိစ္စ၊ အပြာစာပေစသည်) အရလိင်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားသည် (အလားတူသိသိသာသာကွဲပြား)၊ 1% နှင့် 8 အကြားရှိသည်။ သာမာန်လူ ဦး ရေတွင် (ဥပမာ၊ Carnes, 1999; Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948; Seegers, 2003; Sussman, Lisha, & Griffiths, 2011; Traeen, Spitznogle, & Beverfjord, 2004) ။ လိင်စွဲလမ်း (တခါတရံရည်ညွှန်း - များစွာသောအခြားအမည်များအကြား - hypersexuality ရောဂါကဲ့သို့) "အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလိင်လှုံ့ဆော်မှုစိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုတိုးလာအကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါ, arousal, တိုကျတှနျးထားသနှင့်တစ်ဦး Impulse အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့အတွက်ပြဋ္ဌာန်းအပြုအမူ - ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူတစ် maladaptive အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု"(Kafka, 2010, p ။ 385) ။
လိင်စွဲမှုသည် (အခြားအရာများ) တွင်မြင့်မားသောစွန့်စားရမှုအပြုအမူများ (ဥပမာ - ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မျိုးစုံလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ)၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်မရှည်နိုင်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးနည်းခြင်းနှင့်မလုံခြုံသောပူးတွဲမှုပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Dhuffar & Griffiths, 2015; Rosenberg, Carnes, & O'Connor, 2014; Sussman et al ။ , 2011) ။ Key ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေ '' Griffiths က၏ခြောက်လစံ၏အသီးအသီးတို့ပါဝင်သည် (2005စွဲလမ်း၏) အစိတ်အပိုင်းများ '' မော်ဒယ်: (ဈ) salience (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝအတွက်အရေးအပါဆုံးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်နှင့်၎င်းတို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အမူအကျင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်), (ii) ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ (တစ်ဦးချင်းစီလိင်-related အပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏အကျိုးဆက်အဖြစ်သတင်းပို့သောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံများကို), (iii) သည်းခံနေခြင်း (ထိုတပ်မက်လိုချင်သောအကြိုးသကျရောအောင်မြင်ရန်တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပြင်းထန်မှုဘို့လိုအပ်ကြောင်း), (ဃ) ဆုတ်ခွာ (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံကိုရပ်စဲပြီးနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ - စိတ်တိုလွယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည့်) - (၅) ပဋိပက္ခ (မိမိကိုယ်ါနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဘိဥာဏ်ပဋိပက္ခကြောင့်လိင်-related အပြုအမူအတွက်စေ့စပ်အချိန်အလွန်အကျွံပမာဏဖြုန်းဖို့နှစ်ဦးစလုံး), နှင့် (vi) relapse (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အစောပိုင်းပုံစံများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောင်းပြန်များအတွက်စိတ်သဘောထား abstinence သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလပြီးနောက်ကြုံတွေ့ရဖို့) ။
ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်စွဲကုသမှုအတွက်အလုပ်ကြားဝင်၏ဥပမာ (သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး, စကားအမူအကျင့်နည်းစနစ်, psychoanalysis, မိသားစုကုထုံး, လှုံ့ဆျောမှုသင်တန်း, 12-ခြေလှမ်းများနှင့်သက်တူရွယ်တူ-ထောက်ခံမှုအစီအစဉ်များ, Self-အကူအညီအစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတိုးမြှင့်ခြင်း, psychopharmacology များမှာDhuffar & Griffiths, 2015; Griffiths က, 2012; Rosenberg က et al ။ , 2014) ။ သို့သော်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ကုသမှုထိရောက်မှုသုတေသနဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဖျောပွကြားဝင်အများစု (အခြားအမူအကျင့် (အဖြစ်ဓာတု) စွဲလမ်းမှုကိုကုသမှုအတွက်အကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံထားတယ်Rosenberg က et al ။ , 2014) ။ အကျိုးဆက် empirically နှင့်ဆေးခန်းလိင်စွဲလမ်း၏တိကျသောရောဂါလက္ခဏာတွေပစ်မှတ်ထားကြောင်း လိုက်. ကုသအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။
ဓာတုနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကုသတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတသတိ၏ကုထုံးထိရောက်မှုသို့အကဲဖြတ်သုတေသနဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားအလာပေါ်ထွက်လာသောတွေ့ရှိချက်များ (ပစ္စည်းဥစ္စာ / အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်ကုသသတိ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်တည်ရှိWitkiewitz, Marlatt, & Walker, 2005), လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (Griffiths က, Shonin, & ဗန်ဂေါ်ဒွန်, 2016; Shonin, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, & Griffiths က, 2014a), စေချင်တာလေးမျိုး (Shonin, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, & Griffiths က, 2014b), နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း (Iskender & Akin, 2011) ။ သို့သော်ယနေ့အထိမရှိလေ့လာမှုလိင်များအပြင်ကုသမှုအတွက်သတိ၏ applications များစူးစမ်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Shonin, ဗန်ဂေါ်ဒွန်နှင့် Griffiths က (2013) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတပ်မက်လိုချင်သောအရာဝတ်ထုနှင့်အတွေ့အကြုံများအဘို့အစွဲလမ်းကနေသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ကူညီခြင်းအပြင်အချို့ဒုတိယမျိုးဆက်သတိ-based ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတိကြားဝင်အထူးထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်ဆင်ခြင်အသုံးချရန် (SG-MBIs) လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းအကြံပြု လိင်နှင့် / သို့မဟုတ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှပူးတွဲမှု။
Shonin et al မှထောက်ခံအားပေးမှုအခြေခံသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု၏ဒုတိယမျိုးဆက်။ ပထမမျိုးဆက်သတိ -based ကြားဝင် (FG-MBIs) ၏ထက်ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုမော်ဒယ် employ ။ FG-MBIs များသည်စိတ်ကိုအခြေခံသည့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ကိုအခြေခံသည့်သိမြင်မှုကုထုံးစသည့်ကြားဝင်မှုများကိုရည်ညွှန်းပြီးယေဘုယျအားဖြင့်စာရင်းသွင်းသည် Kabat-Zinn ရဲ့ (1994) သတိပါဝငျကွောငျးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် "ပစ္စုပ္ပန်တခဏအတွက်, ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်နှင့် Non-တရားသဖြင့်စီရင်: တစ်အထူးသဖြင့်လမ်းအတွက်သတိထားရမှာ"(1994, p ။ 4) ။ ထိုသို့သောတှေးတောဆငျခွပွားသင်တန်း (MAT) ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်စင်ကာပူဒေါ်လာ-MBIs, ဘာဝနာနည်းစနစ်၏ကြီးမြတ်သောအကွာအဝေးပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပွဲတစ်ပွဲကိုပိုမိုအရတော့ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူကြောင်းကိုသတိတစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်စာရင်းသွင်း။ သတိ၏တစ်ဦးကအဆိုပြုထားစင်ကာပူဒေါ်လာ-MBI ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် "ကဖြစ်ပါတယ်(၁) ဝိညာဏရှုထောင့်နှင့် (၂) တစ်ခဏမှနောက်တစ်ခုသို့ထိန်းသိမ်းထားသောအတွေ့အကြုံရှိသောဖြစ်ရပ်များအားအပြည့်အဝ၊ တိုက်ရိုက်တက်ကြွစွာအသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်"(ဗန်ဂေါ်ဒွန်, Shonin, & Griffiths က, 2015a) ။ အကျိုးဆက်အား SG-MBI သတ်မှတ်ချက်တွင်“ တိုက်ရိုက်အသိအမြင်” ဟူသောဝေါဟာရသည် FG-MBI အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်“ မစီရင်ဆုံးဖြတ်မှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သည်။ ဗန်ဂေါ်ဒွန် et al အရသိရသည်။ (2015a), သင်တန်းသားများကိုတရားစီရင်ခြင်းမပြုရန်သင်ကြားခြင်းထက် SG-MBIs များသည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုများကိုကုသရန်ပိုမိုသင့်တော်သောအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာသတိရှိသောလေ့ကျင့်သူများအား (i) ရေတိုနှင့်ရေရှည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရသတိပြုမိစေရန်အားပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များနှင့် (၂) အချို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးချရမည့်ကုထုံးနည်းစနစ်ထက်စိတ်ကိုသတိရှိခြင်းကိုဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်စပ်ရန်ဝိညာဉ်ရေးအရအပ်နှင်းထားသည်။
ဤစာတမ်းလိင်စွဲကုသမှုအတွက်သတိ၏ utility ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပိုများသောအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ-MBI အသုံးချဖို့ကုသမှုခံယူတဲ့သူစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခံစားနေရပြီးတစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးတစ်ဦး In-depth ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတွေ့ရမယ်။
"အာဒံ" သူ၏အစောပိုင်းသုံးဆယ်၌တည်ရှိ၏နှင့်မှီခိုခြင်းမရှိဘဲတစ်ခုတည်း, ကွာရှင်း, အဖြူရောင်ဗြိတိန်အထီးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအစိတ်ရောဂါသမိုင်း6လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များ (တစ်ဦးချင်းစီ3လအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သော) (နှစ်ခုကာလပါဝင်သည်ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder, မကြာမီကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့အပိုင်း, အပျော့စား, DSM-IV-TR Code ကို 296.31) နှင့်5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder, လူပျိုအပိုင်း, အပျော့စား, 296.21) ။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စဉ်များအတွက်, စိတ်မကျဆေး Antidepressants အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ အာဒံရဲ့လက်တွေ့သမိုင်းမဟုတ်ရင်ငျြးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူက 42 months ago ရှင်းပြနေတုန်းပဲလက်ထပ်စဉ်သူက "လိင်စွဲဖြစ်လာမှစတင်။ "အပြင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်6လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်တစ် 1-သီတင်းပတ်ကာလများအတွက် Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုကိုတက်ရောက်ခြင်းထဲကနေသူယခင်ကမိမိအ hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုဆည်းကပ်မထားပါဘူး။
အာဒံကိုပုံမှန်ပြည်တွင်းခရီးသွားများနှင့်နေ့ချင်းညချင်းဟိုတယ်မှာပဲကျန်ရှိနေပါဝငျကွောငျးအရောင်းအနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍသူ့ကိုအပြည့်အဝ expensed ကုမ္ပဏီကားတစ်စီး၏အသုံးပြုမှုကိုရရှိနှင့်အလုပ်တည်နေရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှငျ့အတူသူ့ကိုပေးပါသည်။ သူကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးဟိုတယ်အတွက်တစ်ပတ်ကိုသုံးညသုံးစွဲသူယေဘုယျအား 1 နေ့ကအပတ်တိုင်းကုမ္ပဏီရုံးခန်းများရောက်ရှိ။ အာဒံအတိတ်4နှစ်ပေါင်းသူ့ရဲ့လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍအတွက်အသုံးချခဲ့သည်။ သူသည်ယခင်ကအမျိုးမျိုးသောရောင်းအားအခန်းကဏ္ဍဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ထွက်ခွာအပေါ်သို့2နှစ်လစာဘွဲ့ရလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အာဒံရဲ့လက်ရှိအလုပ်ရှင်နှင့်အတူမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်နိုင်ငံလုံးကြော်ငြာနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်န်ထမ်းလျှောက်ထားရန်အားပေးတိုက်တွန်းကြသည် (နှင့်မကြာခဏဦးစားပေးကြသည်) ။ ယခင်2နှစ်အတွင်းမှာတော့အာဒံနှစ်ခုပြည်တွင်းရေးရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားရန်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကအားပေးအားမြှောက်, ဒါပေမယ့်သူက "ကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးအဆင်ပြေ"မိမိသည်လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍပါ။
နှစ် ဦး စလုံးအများပြည်သူကဏ္ sector အခန်းကဏ္ in များတွင်အလုပ်လုပ်သောသူသည်သူ၏ဇီဝဗေဒမိဘများကကြီးပြင်းခဲ့သည် အာဒံ၏ ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင်မိဘများကွာရှင်းခဲ့ပြီးမိဘနှစ် ဦး စလုံးသည်နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ အာဒံကသူ့မိဘတွေကို“, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှင့်ထောက်ခံ"နှင့်သူနဲ့သူ့သာမှေးခငျြး (ကညီမ) နှစ်ဦးစလုံးကောင်းတစ်ဦးပြုစုပျိုးထောင်လက်ခံရရှိကြောင်းခံစားရ၏။ သူက "သည်သူ၏မိဘ၏သက်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူကောင်းသောဝေါဟာရများအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်အသုံးပြုသောတယ်"သူ၏ဇီဝမိခင်နှင့်ဖခင်အကြားအနည်းဆုံးဆက်သွယ်ရေးလက်ရှိလည်းမရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်သည်။ အာဒံကိုသူ၏မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကမဆိုအားမိမိစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မထားပါဘူး။
အာဒံကိုသူအထက်ဒုတိယ-class ကိုဂုဏ်ထူးတွေနဲ့လွန်တဲ့ BSc ဘွဲ့နှင့်အတူဗြိတိန်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရများ၏ထိုအချိန်တွင်သူတစ်ဦးဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏မာစတာ ဒါပေမယ့်အစား paid အလုပ်အကိုင်အယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူကပြည်နယ်ကျောင်းပညာရေးတက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်သူ၏ A-level ကိုအဆင့်တက္ကသိုလ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုတက်ရောက်ရန်သူ့ကို enabled ။
သူသည်ကွာရှင်းသည့်အချိန်အထိအာဒံ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအများစုသည်သူနှင့်သူ၏ဇနီးသည်အခြားအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံသည်တက္ကသိုလ်မှထွက်ပြီး ၂ နှစ်ခန့်အကြာတွင်သူ၏ဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၄ နှစ်လက်ထပ်ခဲ့သည် ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးကတည်းကအာဒံဟာတစ်ကိုယ်ရေဘဝနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးလက်ရှိလူမှုရေးဆက်ဆံမှုတွေမှာအလုပ်မှလုပ်ဖော်များ (၁) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ (၂) တက္ကသိုလ်ကတည်းကသိကျွမ်းခဲ့တဲ့ရေရှည်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၊ စီးပွားရေးသမားများကသူသည်ဟိုတယ်များတွင်တွေ့ဆုံကြောင်းနှင့် (iv) သူသည်ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်သူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သူဖြစ်သည်။
အာဒံကိုအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့မိမိဇီဝမိဘများကိုဖော်ပြရန်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကအင်္ဂလီကန်ခရစ်ယာန်များအားအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြားအာဒံနှင့်အညီ, သာခရစ်စမတ်မှာဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အာဒံ ", တက္ကသိုလ်မှာနေစဉ်ဖော်ပြထားငါသည်ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာဘက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်"သူကပိုစိတ်အားထက်သန်စွာခရစ်ယာန်ဘာသာစူးစမ်းလေ့လာတော့တယ်။ သို့သော်အာဒံအချို့စနစ်တကျခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အတူစိတ်ပျက်ဖြစ်လာပြီးတစ်ဦး "ရှိကွောငျးကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခရစ်တော်၏သွန်သင်ချက်များနှင့်ဘုရားကျောင်း၏သွန်သင်ချက်အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်။ "အကျိုးဆက်အာဒံဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အကျိုးစီးပွားတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူကဘာဝနာကြိုးစားခဲ့နှင့် (ဤနိုင်ငံများရှိဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကိုသွားရောက်ခြင်းအပါအဝင်) ထိုင်းနှင့်နီပေါ၏ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေသွားရောက်ခဲ့သည်။ အာဒံသည်မိမိနှစ်လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအတွင်း6လကာလများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာစင်တာမကြာခဏ။ သူသင်တန်းပို့ချဖြစ်တွေ့ရှိသောကွောငျ့သူက "ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူခံစားပေမယ့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆုံးရှုံးဖို့စတင်Two-မျက်နှာနှင့်အပေါ်ယံ။ "အာဒံဗုဒ္ဓဘာသာအလေ့အကျင့်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်အတိတ်3နှစ်အတွင်းဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်အတူအနည်းဆုံးအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ psychotherapist နှင့်အတူ (နှင့်တစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆက်တွဲအစည်းအဝေးတွင်) မိမိကနဦးအကဲဖြတ်မှာအာဒံလူတစ်ဦး, နေရာ, အချိန်နှင့်အခြေအနေအဖြစ်သိမှဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက (အဝတ်အစားအတော်ကြာပစ္စည်းများကိုတစ်ဒီဇိုင်နာတံဆိပ်ဖော်ပြပေး) ကောင်းစွာတင်ဆက်ခဲ့ပြီးစမတ်-ပေါ့ပေါ့ခါးပန်းကို ironed ဝတ်ဆင်။ သူ၏မျက်နှာကိုစင်ကြယ်သော-ရိတ်ကြီးနှင့်သူမကြာသေးမီကဖြတ်ခဲ့သူ၏ဆံပင်ပေါ်တွင်ပုံစံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အာဒံအမွှေးကိုဝတ်ဆင်နှင့်သူ၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်လက်ပတ်နာရီမကြာသေးမီနဲ့ high-end မော်ဒယ်များဖြစ်သည်ထင်ရှား။ , အာဒံနောက်ဆက်တွဲကုထုံးအစည်းအဝေးများအသီးအသီးကာလအတွင်းကသူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့်ထိုအတူကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကန ဦး အကဲဖြတ်မှု (နှင့်ဒုတိယနှင့်တတိယအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများ) တွင်အာဒံ၏မျက်လုံးများသည်အတော်အသင့်သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ခဲ့ပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုငြင်းပယ်သော်လည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပုံပေါက်သည်။ စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်မှာအာဒံသည် ၆ ပေ (၁၈၃ စင်တီမီတာ) ရှိပြီးအလေးချိန် ၈၅ မှ ၈၇.၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း ၂၆-၂၇ နှင့်ကိုက်ညီသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအာဒံသည်အဝလွန်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ အာဒံတွင်မြင်နိုင်သောတက်တူးသို့မဟုတ်ထိုးဖောက်ခြင်းမရှိပါ။ မေးမြန်းခံရခြင်းမရှိပဲအကဲဖြတ်မှုစတင်ချိန် (နှင့်နောက်တစ်ဆင့်စီ) တွင်သူ၏ဖုန်းကိုအသံတိတ်သွားစေခဲ့သည်။
အာဒံဟာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီးကောင်းမွန်စွာပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ သူသည်ဘီစကွတ်နှင့်ကော်ဖီသောက်ရန်သူ့ကိုယ်သူကူညီခဲ့သည် (မိနစ် ၉၀ အတွင်းကော်ဖီနှစ်ခွက်သောက်ခဲ့သည်) ။ အာဒံသည်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရာတွင်ပြသနာများမပြခဲ့သော်လည်းကန ဦး အစီအစဉ်တွင်ပြသခဲ့သည့်သူ၏ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့သည်။ သူ၏လက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးစဉ်အာဒံသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုကြာအောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြုတ်ပစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူသည်အလှည့်ကျစကားပြောလေ့ရှိသည် (ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်အားသူတို့၏ဝါကျအဆုံးသတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ) ။ ဘာသာရပ်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးပမ်းနေပုံရသည့်ထိုကဲ့သို့သောကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်သည်သူ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှစတင်ပြောဆိုသည့်အခါခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၅၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်များ၌အာဒံသည်ပိုမိုတင်းမာသောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟန်အနေအထားရှိခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မှုတို့ဖြစ်လာသည်။ ဤအပြုအမူသည်သူ၏အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိမိအကနဦးအကဲဖြတ် session တစ်ခုမှာအာဒံ "ဖော်ပြထားရှိသမျှတို့ကိုငါဒီအကြောင်းပြောနေတာအဆင်မပြေခံစားရ"နှင့်"သငျသညျငါစနစ်တကျစကားပြောင့်ကိုပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်။ " တခါတရံသူသည်စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျသည့်လက္ခဏာများ (ဥပမာအဆိုးမြင်၊ လှောင်ပြောင်။ စိတ်တိုလွယ်သောလက္ခဏာများ) ကိုပြသခဲ့သည်။ သူသည်အများအားဖြင့်အအေးနှင့်ရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤနောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး မှရင်ဆိုင်သောအခါအာဒံသည်တောင်းပန်ပြီးရှင်းပြသည်။ငါအခုငါ့အပန်းကန်ပေါ်မှာအများကြီးရရှိပါသည်။ "
အာဒံကရှင်းပြသည်မှာလွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့် (ဆိုလိုသည်မှာသူမကွာရှင်းမှီ ၁ နှစ်) ကသူသည်“ ခွန်အားဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသည်” ဟုရှင်းပြခဲ့သည်ဟောင်းနွမ်းလိင်ဘဝ"နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပျက်ကွက်။ အာဒံကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနှင့်စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့သူ့ဇနီးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ သူဟာမဟုတ်သလိုသူ့ဇနီးမမီဤအချိန်မှညစ်ညမ်းအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အာဒံကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2လကာလအဘို့, သူ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်တိုးလာသည်ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှု "သူ၏ဇနီး, အာဒံနှင့်အညီဖြစ်သောကြောင့်အတော်လေးခဏတာခဲ့သည်ကပျင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ "အာဒံ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်လိင်နှိုးဆွခံရဖို့မိမိဇနီး၏ပညာအတတ်မရှိဘဲသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆက်လက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဒမ်သည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစတင်စုဆောင်းခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ သူသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစကြည့်ရှုပြီးနောက်ခြောက်လ (ဥပမာ၊ သူမကွာရှင်းမှီ ၆ လ) ကအာဒံသည်တစ်ပတ်လျှင်ငါးကြိမ်ခန့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ သူကဒီအချိန်လောက်မှာသူဟာယောက်ျားတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုကြည့်ပြီးလိင်တူချစ်သူတွေကိုလိင်တူချင်းဆက်ဆံတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူမလိင်ဆက်ဆံဖို့စတင်ခဲ့တယ်၊ သူသည်လိင်တူချစ်သူလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုသူ၏အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းအစုရှယ်ယာများတွင်စတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
သူကကွာရှင်းမတိုင်မီအာဒံကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5လအတွင်းဖော်ပြထား "ညစ်ညမ်းအလုံအလောက်ဖြစ်ခြင်းရပ်တန့်" နှင့် "ငါသည်လိင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းဖို့လိုတယျ။ " သူကဖော်ပြ "ငါ့ဇနီးဒါနဲ့ရံဖန်ရံခါအမျိုးသမီးနှင့်အထီးစောင့်အရှောက်သုံးစွဲဖို့စတင်သိကျွမ်းချင်ကြဘူး။ " အာဒံကိုဤအချိန်တွင်သူသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ချိန်ကနှစ်ပတ်တစ်ဦးအစောင့်အကြပ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းမည်ဟုကရှင်းပြသည်။ သူကသူ့ဇနီးကသူသည်သူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခဲ့ထုတ်တွေ့ရှိရသည့်အခါကွာရှင်းလွှဲမရှောင်သာဖြစ်လာခဲ့သည်, မိမိအိမ်ထောင်ကိုပျက်ကွက်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အာဒံအတံခါးကိုဖွကွေားအားမိမိကွန်ပျူတာကျန်ရစ်ခဲ့ပေမယ့်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ကစားကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်မိမိမယားအဘယ်သူသည်မြင်ခဲ့သည် "အထဲက freaked" နှင့်5ရက်အကြာတွင်၎င်းတို့၏အိမ်တော်ထဲကပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ကွာရှင်းပြီးနောက် ၁၈ လခန့်ကြာပြီးနောက်သူသည်အာဒမ်ရှင်းပြသည်ထိန်းချုပ်"နှင့်သူ၏အသစ်တွေ့ရှိခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ခံစားခဲ့သည်။ သူသည်နိုင်ငံအတွင်းအနှံ့အပြားတွင်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အဆက်အသွယ်များကွန်ယက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်မပါ ၀ င်သော (ပုံမှန်အားဖြင့်) အခြေခံအားဖြင့်သူနှင့်ပါ ၀ င်ခဲ့သူအနည်းငယ်သာပါဝင်သည်။ ထိုအချိန်က (ဆိုလိုသည်မှာကုသမှုမခံယူမီ ၁၈ လအလိုတွင်) သူ၏လစဉ်လစာသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုတစ်ပတ်လျှင်ပေါင် ၃၅၀ ကုန်ကျသည်မဟုတ်တော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် အကျိုးဆက်အားဖြင့်သူသည်အရင်းအနှီးများရရှိရန်သူ၏အိမ်ကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးငှားရမ်းထားသောနေအိမ်သို့ပြောင်းခဲ့သည်။
ကန ဦး အကဲဖြတ်မှုအစည်းအဝေးတွင်အားပေးပြီးနောက်များစွာသောအားပေးမှုများရရှိပြီးနောက်အာဒံကသူ၏လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအရသူသည် (၁) တစ်ပတ်လျှင်ခြောက်ကြိမ်စောင့်ရှောက်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ မိနစ် ၆၀ ခန့်ကြာသည့်သူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အာဒံကိုနှစ်ကြိမ်သုက်လွှတ်စေသည်။ (၂) တစ်ပတ်လျှင်ပေါင် ၅၀၀ ကိုအစောင့်အကြပ်များအတွက်သုံးစွဲသည်။ လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ (၄) ဆိုက်ဘာဆက်စ် (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) တွင်တစ်ပတ်လျှင်ငါးကြိမ်၊ (၅) နာရီ“လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ဖြောင့်လိင်ဗီဒီယိုများတစ်နေ့ကို ၃၀ မှ ၄ မိနစ်ခန့်ကြာသောခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ (၁၅-၂၀ မိနစ်ကြာသည်) နှင့် (၆) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေစဉ်တစ်ပတ်လျှင်ငါးကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။ အာဒံကသူသည်အမြဲတမ်းလိင်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးသူသိသည်အတိုင်းသူသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုတစ်ခါမျှမကူးစက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်း) ကိုတစ်ခါမျှမဆက်ဆံဖူးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
အာဒံ "အတိတ်ကာလတစ်နှစ်ကာလအတွင်းသူဟာတခါတရံခံစားခဲ့ရကြောင်းရှင်းပြခဲ့အချည်းနှီးသောနှင့်စျေးပေါ"တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံအောက်ပါ။ သူက "ကြောင်းဖော်ပြထားငါသိပ်ကြောင့်ပျော်မွေ့ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိ [ပေမယ်]။ "အာဒံအတိတ် 12 လအတွင်းလိင်-related တွေ့ဆုံတော်တော်များများနှင့်အခါသမယအပေါ်အသုံးစရိတ်၏ကြိမ်နှုန်းလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့သော်သူကရှင်းပြတယ် "ငါကြိုးစားပြန်ဖြတ်အခါတိုင်းကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရက်အနည်းငယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ပါတ်မှုအတွက်ကြာပေမယ်ထို့နောက်သူကသိပ်ရရှိသွားတဲ့နဲ့ကျွန်မ 48 နာရီသင်တန်းကျော် [လိင် paid နှင့် / သို့မဟုတ် masturbating ဘဲလျက်] ခုနစ်ခုသို့မဟုတ်ရှစ်ကြိမ်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။"သူကဖော်ပြထား"ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာဤကဲ့သို့သောဖြစ်ဘို့ကမှားကိုသိ။ "
အဒမ်ကသူအိပ်ပျော်အောင်ကူညီပေးရန် (ဥပမာ၊ ဆိုက်ဘာဆက်စ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်သည့်အခါ) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်ဟုဝန်ခံသည်။ သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ညလျှင် ၅-၆ နာရီအိပ်သည်။ သူကမကြာသေးမီကသူက "သူကအစီရင်ခံခဲ့သည်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောဖြစ်လာမှစတင်"နှင့်သူ၏အလုပ်တယ်လီဖုန်းနှင့်အလုပ် laptop ကိုလိင် -related ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံသူတစ် ဦး သည်ရက်စွဲသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညွှန်ပြခြင်းမပြုပါက (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်ဓာတ်ပုံများပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်) သူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟုအာဒံရှင်းပြခဲ့သည် သူကလက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများသည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ငါဇနီးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၌ဤအဆင့်မှာလေးနက်သောမိတ်ဖက်များအတွက်အဆင်သင့်ပါပဲမသေချာဘူး။ "
အာဒံကိုမဆိုသတ်သေ ideation အဖြစ်လောင်းကစားဝိုင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာ, ဒါမှမဟုတ်အရက်မှီခိုငြင်းဆို (သို့သော်မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအများစုအရက်သောက်အချို့ကိုပုံစံဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ဟုရှင်းပြခဲ့) ။ သူကရံဖန်ရံခါစီးကရက်သောက်သော်လည်းသူ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကြောင်းအခိုင်အမာ "လူမှုရေးရည်ရွယ်ချက်များ"သူကနီကိုတင်းမှီခိုမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်အာဒံသည်တစ်နေ့လျှင် ၅-၁၀ စီးကရက်သောက်သည်။ များသောအားဖြင့်ညနေခင်း၌ဖြစ်စေ၊
အာဒံ၏ပြaticနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်သူ၏လိင်စွဲမှုမတိုင်မီ ၁၈ လမတိုင်မီကဖြစ်ပွားခဲ့သောအဓိကစိတ်ကျဝေဒနာအဆင့်မှကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည် (အာဒံသည်သူ၏ပြproblemနာဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ပြီးနောက် ၆ လအကြာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏ဒုတိယအဆင့်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်) ။ သက္ကရာဇ်စဉ်အစဉ်အလာအရအာဒံကိုလိင်စွဲလမ်းမှုသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရောဂါ၏အသုံးအနှုန်း (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်ဘဲ) ဖြစ်သည်။ DSM-18 စံသတ်မှတ်ချက်အရအာဒံသည်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာ ၀ န်၏လက်ရှိစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရမှုနှင့်သူ၏ယခင်ရောဂါလက္ခဏာကိုပြသခြင်းကိုအတည်ပြုသောအကဲဖြတ်ခြင်း ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder (မကြာမီကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့, အပျော့စား) နေဆဲလက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ အိပ်စက်ခြင်းချို့ယွင်းအပြင်, အာဒံရဲ့လက်တွေ့ပရိုဖိုင်းကိုနောက်ထပ်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်ခဲ့ ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ပြဿနာများ (DSM-5 ကုဒ် V62.89) ရလဒ်အားဖြင့် (၁) ယုံကြည်ခြင်းပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်ခြင်းနှင့် (၂) ၀ ိညာဉ်ရေးရာတန်ဖိုးများကိုမေးမြန်းခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်သောကရောက်စရာအတွေ့အကြုံများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆိုပါ 45-ကို item လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် - Revised (SAST-R, Carnes, အစိမ်း, & Carn, 2010) စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ SAST-R ကိုပစ္စည်းများကိုပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ဖြစ်စေအဖြစ် rated နှင့်အဓိကစကေးပေါ်တွင် 20 ပစ္စည်းများကိုခြောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတစ်ခု "ဟုတ်ကဲ့" တုန့်ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေလိင်စွဲလမ်းညွှန်ပြနေကြသည်။ အမျိုးမျိုးသော subscales လိင်စွဲလမ်း၏ရှုထောင့်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်တိကျသောအတိုင်းအတာအပေါ်ပြဿနာတစ်ခုညွှန်ပြရန် (လေးငါးဖြစ်စေမေးခွန်းများ) နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဖြစ်စေ "ဟုတ်ကဲ့" တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်သည်။ SAST-R ပစ္စည်းများဥပမာ "များမှာမည်သူမဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စိတ်ခံစားမှုကိုထိခိုက်ခဲ့သလဲ"နှင့်"သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသင် သာ. အစွမ်းရှိ၏ထင်ပါသလားအာဒံ၏အခြေခံရမှတ်မှာ (၂၀ ခန့်အနက် ၁၆) ဖြစ်ပြီးသူသည်လိင်စွဲလမ်းမှုအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြသည်။ သူသည်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများသည်သူ၏ပြproblemနာဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အဓိကကဏ္wereများဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ subscale မေးခွန်းအများစု၏“ ဟုတ်ကဲ့” အဖြေများကိုသူတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ (၁) စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ (၂) ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ (၃) ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် (၄) ) နှောင့်အယှက်ကိုထိခိုက်။
အဆိုပါ 21-ကို item စီးပွားပျက်ကပ်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုစကေး (DASS; Lovibond & Lovibond, 1995) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကဲဖြတ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ ဒီစကေးလေးမှတ် Likert စကေး (0 င် = မှ) အပေါ်သွင်းယူထားသည် မှာအားလုံးငါ့ထံသို့လျှောက်ထားမဟုတ်3= ငါ့ထံသို့အသုံးချအလွန်သို့မဟုတ်အရှိဆုံးအချိန်) နှင့်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထား "ကျွန်မဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့ခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ " (ထို DASS အထက်ပါ7ရက်ကြာကာလ၏လေးစားမှုခုနှစ်တွင်ပြီးစီးသည်သုံးခုခွဲကြေးခွံ၏အသီးအသီးအဘို့ရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုခြုံငုံအကဲဖြတ်ပေးအတူတကွချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်ဗန်ဂေါ်ဒွန် et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ DASS ကို manual အရ (Lovibond & Lovibond, 1995အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း), လက္ခဏာပြင်းထန်မှုများအတွက်ရာခိုင်နှုန်း cutoffs (နှင့်သက်ဆိုင်ရာယုတ်ရမှတ်များ) ဖြစ်ကြ: 0-78 (M ≤ 13) = ပုံမှန် ၇၈-၈၇ =M = 14-18) = ပျော့, 87-95 (M = 19-28) = အလယ်အလတ်နှင့်> 95 (M severe 28 = ပြင်းထန်) ။ အာဒံ၏အခြေခံရမှတ်မှာ ၂၄ (ဆိုလိုသည်မှာအလယ်အလတ်) ဖြစ်သည်
အဆိုပါ အထွေထွေစကေးအတွက် Abridged ယောဘသည် (AJIGS; Russel et al ။ , 2004) အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုရှစ်ကို item အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစကေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်လက်ရှိတွင်အတွက်အသုံးချသောအလုပ်နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါ adjective နာမဝိသေသနသို့မဟုတ်အတိုကောက်စာပိုဒ်တိုများပါရှိသည်: "ငါ့ကိုအကြောင်းအရာစေသည်", "အများဆုံးထက် သာ. ကောင်း၏", "ကောင်းသော", "လွဲ", "အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့", "ပျော်စရာ," "ဆင်းရဲသားကို" နှင့် "မလိုလားအပ်သော။ " တစ်ဦးချင်းစီကို item အဘို့, ဖြေဆိုသူ ( "no" ဆိုတဲ့) သူတို့ ( "ဟုတ်ကဲ့") သဘောတူလျှင်, ( "?") သေချာမသိကြဟုမေး, ဒါမှမဟုတ်သဘောမတူနေကြသည်။ သုံးယောကျတစ်ဦးကရမှတ် "?" "ဟုတ်ပါတယ်" တစျခုအတှကျအဘို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်သုညဖြစ်ပါတယ် "no ။ " တစ်ဦးချင်းပစ္စည်းများကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရမှတ်များနှင့်အဆိုးကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုပေးစေခြင်းငှါချုပ်ဖော်ပြနေကြသည်ပြောင်းပြန်သွင်းယူနေကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များအလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုပိုမိုအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြသည်။ စားသုံးမှုအပေါ်အာဒံရဲ့ရမှတ်အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုအနိမ့်အဆင့်ကိုညွှန်ပြ, (တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ 24 ထဲက) ခုနစျပါးခဲ့ပါတယ်။
ခုနစျပါး-ကို item non-နှောင်ကြိုးစကေး (NAS; Sahdra, Ciarrochi, က Parker, မာရှယ်, & ကောင်းကင်, 2015; Sahdra, Shaver, & Brown, 2010) စိတ်ရောဂါတစ်ဗုဒ္ဓဘာသာမော်ဒယ်ပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်တစ်ဦးချင်းဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာ၏အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ပစ္စည်းရှုထောင့်မှပူးတွဲပါနေသည်မှအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ထားပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသီအိုရီအရသိရသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပြင်ပဖြစ်ရပ်မှပူးတွဲမှု selfhood တစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအသိအပေါ်သို့မှီခိုသောကွောငျ့ default အနေဖြင့်အဆိုပါ NAS လည်း (တစ်ဦးချင်းစီ "သူတို့ကိုယ်သူတို့မှပူးတွဲပါ" ဖြစ်ကြောင်းအတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာဗန်ဂေါ်ဒွန်, Shonin, Griffiths က, & Singh က, 2015b) ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အယူအဆအပေါ် မူတည်၍ မိမိကိုယ်ကိုမတည်ရှိပါ။ မိမိကိုယ်ကို (နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ [Shonin, Van Gordon, & Griffiths (2014c) အနောက်တိုင်းစိတ်ပညာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရန်] ။ NAS ကို (၁) မှ (၆) မှတ် Likert စကေးဖြင့်ရရှိသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ6= ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော "အဖြစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသာယာသောအတွေ့အကြုံများအဆုံးသတ်သောအခါ, ငါဒဏ်ငွေကိုနောက်ကြွလာအရာကိုအပေါ်ရွေ့လျားနေပါတယ်။ "အဆင့်မြင့်ရမှတ်ပူးတွဲမှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့် (သို့မဟုတ် Non-attachment ကိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်) ကိုထင်ဟပ်။ အာဒံရဲ့အခြေခံရမှတ် (ကဖြစ်နိုင်သမျှ 16 ထဲက) 42 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခုနစျပါး-ကို item Pittsburgh အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း (PSQI; Buysse, Reynolds က, ဘုန်းကြီး, Berman, & Kupfer, 1989) ပြီးခဲ့သည့်လကပုဂ္ဂလဒိsleep္ sleep ည့်ညီသောအရည်အသွေး၊ အိပ်ချိန်နောက်ကျခြင်း၊ အိပ်ချိန်ကြာမြင့်ခြင်း၊ ပုံမှန်အိပ်ခြင်းထိရောက်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ PSQI ကိုလေးမှတ် Likert စကေး (0 =) တွင်သွင်းသည် အဘယ်သူမျှမခက်ခဲ နှင့်3= အစွန်းရောက်အခက်အခဲ) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော "အဖြစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားလွန်ခဲ့သောတစ်လအတွင်းမှာသင်မည်သို့ခြုံငုံသင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်သတ်မှတ်မည်နည်း?"≥5၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရမှတ်အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းဖော်ပြသည်။ အာဒံရဲ့အခြေခံရမှတ် (ကဖြစ်နိုင်သမျှ 14 ထဲက) 21 ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပနျးတိုစကေး (သဘာဝဓာတ်ငွေ့; Kiresuk & Sherman, 1968) ကုသမှုပနျးတိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်နှင့်ရည်မှန်းချက်များတစ်ခုစီးရီးအပေါ်သို့သဘောတူ client ကိုနှင့်ကုထုံးပါဝငျသညျ။ ပနျးတို၏အဆင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအမူအကျင့်ဖော်ပြချက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရမှတ်များအတွက်သဘောတူညီခဲ့ရည်မှန်းချက်များအသီးအသီးအဘို့ (မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်ကိုကျော်လွန်) +2မှ -0 (ဆုတ်ယုတ်) မှ2(မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်ကိုမှီ) မှတဆင့်အထိ။ တစ်ဦးချင်းစီပနျးတိုငျမြားအတှကျရမှတ်များပေါင်းစပ်ကြသည်, ပြီးတော့ဓာတ်ငွေ့ပြောင်းလဲခြင်းသော့ချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရမှတ်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုမှာတော့ငါးခုအညီအမျှချိန်ရည်မှန်းချက်များရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ 50 ၏တစ်ဦးကရမှတ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုမျှော်လင့်ထားသည့်အဆင့်ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုပိုမိုအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ရက်တာကာလကို အခြေခံ၍ အောက်ပါရလဒ်အစီအမံတစ်ခုချင်းစီတွင်အပြောင်းအလဲများကိုအာဒံ၏နေ့စဉ်နို့ထွက်ပစ္စည်းကို သုံး၍ အကဲဖြတ်သည် (ကွင်းခတ်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေခံတန်ဖိုးများ) - (၁) အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းအပြာရုပ်ပုံများကြည့်သည့်အချိန် (၁၃.၅ နာရီ) (၂) cyber-sex (၁၀ နာရီ) တွင်အချိန်ကုန်ခြင်း၊ (၃) အခကြေးငွေရသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြိမ်အရေအတွက် (အစည်းအဝေး ၁၂ ခု) နှင့် (iv) အစောင့်အကြပ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အသုံးစရိတ် (£ 14) ။ အထက်ဖော်ပြပါရလဒ်များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကာလ (၄) ခုဖြင့်အကဲဖြတ်သည် - (၁) အခြေခံ (t1), (ii) နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကုသမှု (t2 [ရက်သတ္တပတ် 5]), (iii) ကုထုံးရပ်စဲ (t၃ [သီတင်းပတ် ၁၀]) နှင့် ()) ၆ လနောက်ဆက်တွဲ (t4) ။ အထက်ပါအကြေးခွံအားလုံးသည်ကောင်းသော psychometric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူစိစစ်တူရိယာထူထောင်လျက်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအာဒံ၏ကန ဦး ဖော်ပြချက်သည်ကောင်းစွာရည်ရွယ်ထားပုံရသည် (ဆိုလိုသည်မှာသူ၏အိမ်ထောင်ရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ) သို့သော်သူ၏အိမ်ထောင်ရေးမှာယိုယွင်းလာပြီးဇနီးဖြစ်သူသည်လိင်ကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းသိမြင်လာသောအခါသူသည်လိင်စိတ်တွန်းအားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်လိင်အစောင့်အကြပ်များနှင့်ရံဖန်ရံခါထိတွေ့ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၂ လကြာသည့်တိုင်အာဒံသည်သူ၏လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ သူသည်သူမကွာရှင်းပြီးသည်အထိသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အစောင့်အကြပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းစေနိုင်ပြီးပြproblemနာဖြစ်လာသည်။
ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးမိတ်ဖက်ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးနောက်သူတို့ကိုရှာမယ့်အစား, အာဒံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသူ့ရဲ့ပုံစံသို့သော့ခတ်နှင့်ကပြင်းထန်လာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မလွှဲမရှောင်, သူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ maladaptive ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးစွဲတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်လာတော့သည်။ ညစ်ညမ်းအကဲခတ်သို့မဟုတ် paid ထဲမှာပါဝငျ (သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့) ယာယီအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အာရုံခံပြည်နယ်များသွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်။ ဤရွေ့ကား, အလှည့်အတွက်, (အပြုသဘောဆောင်အမှတ်တရများမှမြင့်တက်ပေး၏Baker, Piper, McCarthy, Majeskie, & Fiore, 2004) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲအဆက်အသွယ်ကဤအမှတ်တရများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် re-တွေ့ကြုံခံစားဘေးဒဏ်သင့်ခြင်းနှင့်အာရုံခံတုန့်ပြန်နေတဲ့တဏှာခဲ့သည်။ အဆိုပါတဏှာခံစားချက်အတွက်အလိုရှိသောပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အပြင်, အပိုဆောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမှတ်တရများ (၏ encoding ကမှဦးဆောင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တူညီသောအမျိုးအစားအတွက်ထပ်မံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကကျေနပ်ခဲ့သည်Houlihan & Brewer, 2015) ။ အာဒံကိုသူမရှိတော့သည်သူ၏အပြုအမူရေရှည်မှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်ကြောင်းအမှတ်သို့ရောက်ရှိလူ့ခြင်းနှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဘိဥာဏ်ပဋိပက္ခသည်အထိပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသူ့ရဲ့ပုံစံအားဖြည့်ဖို့ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အစောင့်အကြပ်များကိုအာဒံ၏ကန ဦး အသုံးပြုမှုသည်သူ၏အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများနှင့်မသက်ဆိုင်ပေ။ သို့သော်သူသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး ၏အကူအညီကိုရယူပြီးလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အပြုအမူများ (၁) သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (နှင့်သူ့ဘ ၀ တွင်အခြားပြproblemsနာများ) ခံစားချက်များကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး (၂) သူ၏စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျသည့်လက္ခဏာများကိုတိုးပွားစေသည်။ နှင့်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ထင်ရှားပြ။
မိမိအဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းအာဒံရဲ့မိဘများ၏ကွာရှင်းမလွှဲမရှောင်အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သို့သော်အာဒံကလကျခံဖို့ (လက်ရှိအချိန်တွင်နှင့်သူ၏မိဘများ '' ကွာရှင်းသည့်အချိန်တွင်နှစ်ဦးစလုံး) သည်ထင်ရှားနှင့် "ကြောင်း commentedသူတို့ [ကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျ၏အစ်မ] အပေါ်သက်ရောက်မှု minimize လုပ်ဖို့ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။ "အာဒံတက္ကသိုလ်ကြီးနှင့်ကြုံနေရစဉ်တွင်သိသာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဘိဥာဏ်ပဋိပက္ခ၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာသည်ထ"ဝိညာဏအတောငျ့။"အာဒံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်များခရစ်ယာန်ဘာသာသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေနဲ့သူ့ရဲ့တွေ့ဆုံနေဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြသည်မဟုတ်, ဤသည်သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်တင်းမာမှုတိုးပွားတို့အားထင်ရှားလေ၏။ ဗန်ဂေါ်ဒွန်, Shonin နှင့် Griffiths က (အရ2016), ဝိညာဉ်ရေးရာအာဟာရချို့တဲ့ psychopathology ၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်နှင့်ဖြစ်ကောင်းအာဒံရဲ့စိတ်ကျရောဂါနှင့် hypersexual အပြုအမူစတင်ခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။
ဝိညာဉ်ရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်) အာဒံရဲ့အကျိုးစီးပွားအလားအလာအကာအကွယ်အချက်အဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်နိုငျသညျ။ တကယ်တော့အာဒံ psychotherapist ချဉ်းကပ်တော်မူသည်မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှုကြောင့်အဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်၏ကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အာဒံရဲ့အလုပ်၏အတော်လေး undemanding သဘောသဘာဝသည်သူ၏အခွအေနေမကူညီဘူး။ အာဒံကိုသူအနည်းငယ်မျှသာကြီးကြပ်မှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံရှိရာမိမိအလက်ရှိအခန်းကဏ္ဍအတွက်စိန်ခေါ်မပေးပါ။ ပြည်တွင်းရေးတိုးအခွင့်အလမ်းများကိုလျှောက်ထားရန်ကျဆင်းနေသည်မိမိမူလတန်းအကြောင်းပြချက်တိုးမြှင့်တာဝန်ကသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်လို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အာဒံရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကြိုးစားနေကြကြောင်းနိုင်လျှင်သို့သော် ပို. တာဝန်နှင့်အတူတစ်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအကာအကွယ်အချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
psychotic အင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းနှင့် တွဲဖက်. , လိင်များအတွက်အာဒံရဲ့တဏှာတရားအားထုတ်ရန်-based ပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ်၏သင့်လျော်သောညွှန်ပြ။ စိတ်သီအိုရီအရ, မတရားသောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များရဲ့စဉျးစားဆငျခွပှဲသူတို့လျော့နည်းစားသုံးဖြစ်လာနှင့် (၏သွားလာရင်းပါစေနိုင်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောကြောင်း, ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ objectify စေရန်ကူညီပေးသည်ဗန်ဂေါ်ဒွန် et al ။ , 2015b) ။ အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုအောက်ပါအာဒံ၏ဒုတိယရေးသားသူ (က psychotherapist နှင့်တရားအားထုတ်ဆရာမ) ကအုပ်ချုပ်သောလောက MAT ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ MAT သတိအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်မထွက်ရဘာဝနာတစ်ခုပြည့်စုံချဉ်းကပ်မှုအောက်ပါအတိုင်း - ပေမယ့်သီးသန့်အာရုံစိုက်ဖွဲ့စည်းရန်ပါဘူး - ထိုအစီအစဉ်၏ (ဗန်ဂေါ်ဒွန်, Shonin, Sumich, Sundin, & Griffiths က, 2014).
သတိရခြင်းအပြင် MAT သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်လေ့ကျင့်သူများလိုက်နာကျင့်သုံးသောအလေ့အကျင့်များပါဝင်သည်။ (၁) နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ (၂) သိမြင်နားလည်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်း၊ (၃) ကျင့်ဝတ်နှင့်စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်၊ (v) သည်းခံခြင်း၊ (၆) ရက်ရောမှု (ဥပမာ၊ လူတစ် ဦး ၏အချိန်နှင့်ခွန်အား) နှင့် (vii) ဘဝရှုထောင့်တို့ဖြစ်သည်။ အာဒံတက်ရောက်ခဲ့သည့်အပတ်စဉ် ၁၀ ခုလျှင်တစ်ခုစီသည်မိနစ် ၉၀ အထိကြာခဲ့ပြီးအဆင့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သည်။ (၁) ကုထုံးပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၀ မိနစ်)၊ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 မိနစ်) လမ်းညွှန်တရားအားထုတ်ခြင်းမတိုင်မီချက်ချင်းပင် ၁၀ မိနစ်အနားယူရန်စီစဉ်ထားပြီးအာဒံသည်နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူစေရန်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်တွေးတောဆင်ခြင်သောစီဒီကိုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုစာရေးဆရာ '' ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကထံမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါပါဝင်သူအမည်ဝှက်ပုံစံတစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့သူတို့ရဲ့ဒေတာအတွက်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဆင့် (သီတင်းပတ် ၁–၂)
အဆိုပါကုထုံးမဟာမိတ်အဖွဲ့တည်ထောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဆင့်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောတက်ကြွ Listening, ခြွင်းချက်မရှိအပြုသဘောနှင့် ပတ်သက်. တိကျမှန်ကန်စာနာမှု, လေးစားမှုနှင့်စစ်မှန်သော (အဖြစ်အဓိကကုထုံးအခြေအနေများရေတွင်းများ, 1997) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကိုလည်းအလားတူပင်ဤကုသမှုအဆင့်တွင်အသုံးချခဲ့သည်။ (၁) စွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ကိုအာဒံ၏နားလည်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်၊ (၂) တရားအားထုတ်ရန်ဘောင်အရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့် (၃) etiology၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် hypersexual အပြုအမူလက္ခဏာများသင်တန်း။
ကုထုံး၏ဒုတိယအပတ်တွင် GAS သဟဇာတဖြစ်သောရည်မှန်းချက်ငါးခုကိုအာဒံက (နှင့်စိတ်ပညာရှင်မှသဘောတူသည်) - (၁) လခနှင့်ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ် ၅၀% လျှော့ချခြင်း၊ (၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ဆိုက်ဘာရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်း။ လိင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ (၃) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုကိုကန့်သတ်ထားသည့်လိင်ဆက်ဆံဖက် ၃ ခုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအာဒံ ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုခံစားခွင့်ကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ (၄) အပတ်တိုင်းအိမ်တွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလျှောက်ထားခြင်းနှင့် (၅) ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကျင့်သုံးခြင်း ။ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ဘဏ္spendingာရေးအသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ရည်မှန်းချက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်အပြုအမူကိုအားပေးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်အစောင့်အကြပ်များထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလမ်းဘေးပြည့်တန်ဆာများကိုအသုံးပြုခြင်း) ။
အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဆင့်တစ်ဦးကထပ်မံ key ကိုရှုထောင့်အောက်မေ့အသိအမြင်များ၏အလေ့အကျင့်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်အသက်ရှူအသိအမြင်အာဒံမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူဟာပစ္စုပ္ပန်တခဏအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာအပေါ်သူ၏အသက်ရှူနှင့် 50% အပေါ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မိမိအအသိအမြင်၏ 50% အာရုံစူးစိုက်နေဖြင့်တစ်ဦးအာရုံကိုကျောက်ဆူးအဖြစ်အသက်ရှုပှဲသုံးစွဲဖို့ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီထုံးစံ၌အာဒံနောက်ဆက်တွဲဘာဝနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်များအဖြစ်မွေးမြူရေးစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖမ်းတဲ့နည်းလမ်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
အလယ်အလတ် ၀ င်ရောက်မှုအဆင့် (အပတ် ၃-၈)
အဆိုပါနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဆင့်သတိလေ့ကျင့်ရေးနှင့် တွဲဖက်. အုပ်ချုပ်ခဲ့ငါးခုသော့ချက် element တွေကိုဖွဲ့စည်း:
ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းပြိုကွဲဤအလေ့အကျင့်၏အသွင်သဏ္Buddhာန်သည်သေပြီးနောက်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်၎င်း၏ပြိုကွဲခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းများပါ ၀ င်သောဗုဒ္ဓဘာသာသုတ်များအပေါ်သို့သက်ရောက်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအာဒံအားသူဆန္ဒရှိသည့်အရာဝတ္ထု (ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာ) ၏သဘောသဘာဝကိုပိုမိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြုတ်ခြင်းနှင့် ၄ င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးသဖြင့်မလိုလားအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာလက်သည်း၊ ဆံပင်၊ ချွဲ၊ မစင်၊ ဆီး၊ အော့အန်၊ သွေး၊ ကြွက်၊ သွား၊ အသား၊ ချွေးစသည်။ နောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှုပေးသောတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်သေပြီးနောက်ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုမြင်ယောင်ခြင်းပါဝင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘောသဘာဝနှင့်၎င်းကိုစောင့်မျှော်နေသောမလွှဲမရှောင်နိုင်သောအနာဂတ်ကိုနားလည်ရန်) ။
ဘာဝနာထိတွေ့မှုကုထုံး: အာဒံကုထုံးအစည်းအဝေးများအပြင်ဘက်ဒီ technique ကိုအကောင်အထည်ဖော်အတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နှင့်ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာတစ်ဦးထက်ပိုတိုက်ရိုက်နှင့်ထောက်ခံချဉ်းကပ်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ အာဒံကိုအသံပိတ်ထားခဲ့တဲ့လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာနှင့်အတူကုထုံးဆန့်ကျင်ဘက်ထိုင်လျက်မထွက်ရအကျိုးဆက်တစ်ခုထိန်းချုပ်ထားမြင်ကွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ မိမိအအွန်လိုင်းလိင်ရုပ်ရှင်များထဲမှ (ထို psychotherapist ရုပ်ရှင်မမွငျနိုငျ) ကစားနေစဉ်သူတစ်ဦးပဲ့ထိန်းဘာဝနာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အာဒံကိုပိတ်လိုက်သူ့မျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ပေမယ့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်ခေတ္တရုပ်ရှင်မှာတစ်ချက်ကသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ သူအဖြစ်ရုပ်ရှင်အားဖြင့်အစပျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် somatic ဖြစ်စဉ်များမှပြန်ပြောပြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ် "ရိုးရိုးဖြစ်ရပ်။ " တနည်းအားဖြင့်အာဒံထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ objectify နှင့်ပါဝင်လေ့လာသူအဖြစ်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်သွန်သင်ခဲ့သည်။ အာဒံကိုအရှင်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနှင့်လိင်တို့၌ပြုတော်မူစိတ်ကျန်းမာရေးပြည်နယ်နှင့်အပြုအမူအဆုံးအဖြတ်မပါဘဲတိုကျတှနျးထားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
သနားစုံမက်ခြင်းနှင့်ကရုဏာတရားအားထုတ်ရန်: အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်အာဒံသည်သနားကြင်နာမှုနှင့်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုဖြင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသူမလိင်ဆက်ဆံရန်အခကြေးငွေပေးသူနှင့်အခြားသူများ၏ခံစားမှုများကိုပိုမိုသိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အာဒံသည်သူများကိုသူတစ်ပါးအားလူသားများ (ဥပမာပြproblemsနာများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူ) ရှုမြင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူ၏လိင်ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အရာဝတ္ထုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။
analytical ဘာဝနာ: အာဒံကို (ထပ်မံရှင်းပြဘို့ဆွေးနွေးချက်အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို (သို့မဟုတ်ကြောင်းကိစ္စများအတွက်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်း) ပင်ကိုစရိုက်ကတည်ရှိမယ့်ယုံကြည်ချက်ထိခိုက်စေရန်ရည်ရွယ်ဆင်ခြင်သုံးပြီးပဲ့ထိန်းခဲ့သည်။
အခြေအနေတွင်လိင်ဖြေ - အာဒံကုသမှုရဲ့ဒီအသွင်သဏ္mostlyာန်ဟာများသောအားဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအခြေခံပြီး၊ အာဒံကိုသူရဲ့တွေးတောဆင်ခြင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအချို့ကိုဆက်စပ်ရန်ကူညီခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ အာဒံသည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ယူဆချက်များ၏တရားဝင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်လမ်းညွှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဆိုကရေးတီးသောမေးမြန်းခြင်းများကဲ့သို့သောနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် (၁) လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားဖြစ်ကြောင်း၊ (၂) လိင်မှန်ကန်သောပမာဏမရှိပါ (ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းကွဲပြားခြားနားသည်)၊ (၃) လိင်သည်ဘဝ၏အရေးကြီးသောကဏ္ part တစ်ခုဖြစ်သည်။ (သို့သော် () အရေးကြီးသောရှုထောင့်များစွာရှိသည်။ ()) အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ် ဦး သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုရန်သဘောတူသည့်အခါ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်သဘော (အထူးသဖြင့်လိင်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ) သည်ကြုံတွေ့ရခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်သည်။ (း) ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်အစောင့်အကြပ်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မမှားပါ။ မည်သူမျှထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိလျှင် (၀ န်ဆောင်မှုများအပါအ ၀ င် - အတွေးအခေါ်အပါအ ၀ င်) အထောက်အပံ့နှင့်ဝေဖန်မှုများကိုအသုံးချနိုင်သည် ဤအမှု၌)) နှင့် (vi) ရေရှည်ဆက်ဆံရေး၏အခြေအနေတွင်လိင်သည်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီး၊
ကုထုံးရပ်စဲခြင်း (အပတ် ၉-၁၀)
ကုသမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ကုထုံးရပ်စဲဘို့အာဒံကိုပြင်ဆင်နေအာရုံစိုက်။ သူကသုခချမ်းသာများနှင့်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ထိန်းချုပ်သည်သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်းခံစားခဲ့ရပေမယ့်အာဒံကြောင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာကုထုံးအဆက်အသွယ်ဆုံးရှုံးဖို့ relapse ကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီရန်အာဒံဘာဝနာသူ၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူဆက်လက်ပြီးနေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မှတ်ပုံတင်, စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပေးခဲ့သည်။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းဗျူဟာ cue ကတ်များအာဒံ bi-အပတ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာရည်ညွှန်းဖို့သဘောတူကြောင်းဖော်စပ်ခဲ့ကြသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, စီစဉ်ထားတယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်များအတွက်ရက်စွဲများနှင့်ကြိမ်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်သုံးယောက် 90-မိအာနိသင်တိုးမြှင်အစည်းအဝေးများ 4-ရက်သတ္တပတ်ကြားကာလမှာစီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်။
MAT ၏အောက်ပါပြီးစီး (ဆိုလိုသည်မှာ, t3), အာဒံကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက် DSM-5 ရောဂါရှာဖွေစံသတ်မှတ်ချက်ဆန့်ကျင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှု (ဥပမာ - ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတံခါးခုံအောက်အထိ) ကို ၆ လနောက်ဆက်တွဲ (ဥပမာ - t4) ။ ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 1, သူ့ t3 နှင့် tရှိသမျှသည်အခြားသောရလဒ်ကိုအစီအမံအပေါ်4ရမှတ်ထိုအတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအောင်မြင်သောခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ အာဒံကိုသူမရှိတော့စွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခံစားနေရပြီးခဲ့ညွှန်ပြသည့် SAST-R ကိုပစ္စည်းများမှငါး "ဟုတ်ကဲ့" ဟုလျှောက်ကြ၏။ အဆိုပါ DASS အပေါ်သူ၏ Post-ကုသမှုရမှတ်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုများတဲ့ "ပုံမှန်" အဆင့်ကိုသရုပ်ပြ, သူ၏ tအဆိုပါ AJIGS နှင့် NAS နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်3ရမှတ်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တိုးတက်မှုဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ (အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ဆခဲ့ကြသည် t4) ။ အာဒံရဲ့ tအဆိုပါ PSQI အပေါ်3ရမှတ်သိသိသာသာထံမှ (သို့လျှော့ချခဲ့သည် t1 = 14 မှ t3 = 8), ဒါပေမယ့် Non-ပြဿနာအိပ်ပျော်ခြင်းအဘို့အ≥5တံခါးခုံ () အထက်နေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးအတွက်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများအကြားသရုပ်ပြခဲ့သည် t3 နှင့် t4 နှင့်6လနောက်ဆက်တွဲမှာငါးအာဒံရဲ့ PSQI ရမှတ်ရုံ "ပုံမှန်" အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးများအတွက် cutoff အပြင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပုံ 1 ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရလဒ်ကို variable ကိုရမှတ်များအတွက်ပြောင်းလဲမှု, ဘယ်မှာ t1 = အခြေခံ, t၂ = အပတ် ၅၊ t၃ = ရက်သတ္တပတ် ၁၀ (ကုထုံးရပ်စဲခြင်း)၊ t4 =6လနောက်ဆက်တွဲ။ dotted လိုင်းများတခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေထဲမှာ "ပုံမှန်" လက္ခဏာပြင်းထန်မှု (ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါ) အတွက် cutoff ညွှန်ပြ
အကြား t3 နှင့် t4 အာဒံညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. ထံမှကြားနေ။ လိင်စောင့်အရှောက်အပေါ်သူ၏အသုံးစရိတ်အကြား 60% အထိလျော့ကျ t1 နှင့် t၃ (၁၄ ရက်လျှင်£ ၄၂၀ အထိ၊ တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း) နှင့် ၇၃% ကြားရှိသည် t1 နှင့် t၄ (၁၄ ရက်လျှင်£ ၂၈၀; တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း) အလားတူပဲအာဒံကလည်းသူမပေးတဲ့ကျပန်းလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကွန်ယက်ထဲမှလူများကိုလျှော့ချခဲ့သည် t1 = 10 မှ t3-t4 = 3) နှင့်အကြား t3 နှင့် t4 သူယေဘုယျအားဖြင့်မှာသုံးထိုကဲ့သို့သောအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (တစ်ဦးချင်းစီအပတ်တွင်တဦးတည်းမရတဲ့ပေါ့ပေါ့လိင်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းမည်ဟု t1) ။ 74 ၏အာဒံရဲ့ Post-ကုသမှုသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရမှတ်အားလုံးရည်မှန်းချက်မျက်နှာစာကိုဖြတ်ပြီးအောင်မြင်မှုမှစာအဆက်အသွယ်။ တွင် t(၄) အာဒံကသူသည် (၁) နှစ်လတာအတွင်းစတင်ရန်အတွက် (၁) အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရှုမှတ်ခြင်းအဖွဲ့သို့တက်ရောက်ခြင်းနှင့် (၃) သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းမရှိသောအတွင်းပိုင်းရာထူးတိုးမြှင့်မှုရရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အမူအကျင့်“ငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ "
ဤစာတမ်းသည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်အတွက်အသုံးဝင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးလက်တွေ့လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်။ ယခုလေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ MAT) တွင်အသုံးပြုသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်ဒုတိယမျိုးဆက်အောက်မေ့မှုအခြေပြုကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသား (အာဒံ) သည်စွဲလမ်းစေသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအပြင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြdistနာများအတွက်ဆေးခန်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ ကုထုံးလွန်ပြီးနောက်တိုးတက်မှုများကိုအိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေး၊ အလုပ်အကိုင်အရကျေနပ်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင်လည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လစာရလဒ်များကို ၆ လနောက်ဆက်တွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ဦးအမှု-by-ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာကုသမှုရလဒ်များစက်ချုပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ တစ်ခုစံပြရလဒ်ကိုရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးမိတ်ဖက်ရှာတွေ့ခြင်းနှင့် paid နဲ့မရတဲ့ပေါ့ပေါ့လိင်တွေ့ဆုံရှောင်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြအာဒံကိုကြပြီ။ သို့သော်ပါဝင်သူတစ်ဦးရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစီအစဉ်အပေါ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးနှင့်ဒါကုထုံးရည်မှန်းချက်များအညီချိန်ညှိကြရသည်။ အာဒံကို Post-ကုသမှု escorts, သူတို့ကိုသူ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးသိပ်နိမ့်ကြိမ်နှုန်းမှာလိင်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နှင့်, SAST-R ကိုအပေါ်ရမှတ်ကိုသူမရှိတော့လိင်စွဲခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ပေမယ့် ထို့အပွငျအာဒံရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါငျးတို့သညျအခွားအစီအမံအပေါ်ရမှတ်ကိုသူယခုသူ၏သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
mechanistic လမ်းကြောင်းအဆိုပြုထားတစ်ဦးက key ကိုသတိစွဲ-မောင်းနှင်ရမ္မက်ကနေသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအကွာအဝေးတိုးပွါးနှင့်အရှင် "surfing တတ်ပြီး" (တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတာပါပဲAppel & Kim-Appel, 2009) ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးအမူအကျင့်တတ်ပြီးစောင့်ကြည့်က objectify စေရန်ကူညီပေးသည်နှင့်ဤက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အညီ၏ငျ့သှားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတဏှာ၏ဇီဝပြင်းထန်မှုတစ်ဦးတည်းသတိမလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားဘာဝနာကုသမှုနည်းစနစ်လိုအပ်သည်ကြောင်းကိုဆိုလိုနိုင်ဘူး။ တစ်ဦးချင်းသတိလက်တွေ့တွင်တတ်ကျွမ်းဖြစ်လာဘို့အမှန်မှာထိုအစဉ်အလာဗုဒ္ဓဘာသာစာပေအရသိရသည်ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် (နှစ်ပေါင်းကြာShonin et al ။ , 2014c) ။ ဤအချက်သည်ပြသနာများသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတိုက်တွန်းမှု (နှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြwithနာများ) ရှိသူများသည် (၈-၁၀) သတိထားမှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတက်ပြီးနောက်တက်ကြွစွာအရိပ်အကဲများသိမှတ်ခြင်းများကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်လိုအပ်ချက်ကိုသတိရရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
Shonin et al အရသိရသည်။ (2013, 2014aအပြုအမူစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်ဘာဝနာကိုအသုံးပြုသည့်အခါတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်တဏှာအား (ဥပမာသတိဖြင့်ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်) မည်သို့တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ကြောင်းလေ့လာရန်သာမက၊ ၀ တ္ထုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုတိုက်ရိုက်အားနည်းစေသည့်တရားအားထုတ်ရန်နည်းစနစ်များကိုအသုံးချရန်လိုအပ်သည်။ ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စဉျးစားဆငျခွနည်းစနစ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုပေါင်းစပ်ကြောင်း SG-MBIs, ထို့ကြောင့်ပွဲတစ်ပွဲအမူအကျင့်စွဲကုသဖို့ကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်တဏှာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း (ဥပမာ - ခန္ဓာကိုယ်၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်မမြဲသောသဘောသဘာဝအပေါ်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်) သည် MAT သည်အခိုင်အမာတည်ရှိပြီးလွတ်လပ်စွာတည်ရှိပြီးဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းသွားစေရန်ရည်ရွယ်သောတရားအားထုတ်ခြင်းများပါဝင်သည် (ဗန်ဂေါ်ဒွန် et al ။ , 2014) ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနောက်ကွယ်မှကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရာမှကိုအဓိကအားထား ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာဒဿနစွဲသီအိုရီ "ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာဒဿနစွဲ" maladaptive သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များရဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်း (be မှယူဆသော (OAT)Shonin et al ။ , 2013).
ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာဒဿနစွဲအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် "ဟာမွေးရာပါတည်ဆဲ '' ကိုယ့်ကိုယ်ကို 'သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း' 'ငါ' အဖြစ် '' ချို့ယွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို '' အတွက်မှားများနှင့်နက်ရှိုင်းသော-ရှုံးယုံကြည်ချက်လက်လွှတ်ရန်ဆန္ဒမရှိခြင်း"(Shonin et al ။ , 2013, p ။ 64) ။ က "ကိုယ့်ကိုယ်ကို" သာဝဠာအတွင်းရှိအခြားသောဖြစ်စဉ်များအပေါ်မှီခိုအတွက်တငျပွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ selfhood အတွက်ယုံကြည်ချက် "မှား" စဉ်းစားသည်။ ကိုယ်ပိုင်များ၏အခ်ါဖြစ်တည်မှုအတွက်ယုံကြည်ချက်ထိခိုက်ပျက်ပြားစေလျှင်, ထို့နောက်ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒါကြောင့်လည်း "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်" လိုဆိုအရာဝတ္ထု၏အခ်ါဖြစ်တည်မှုအတွက်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ OAT အဆိုအရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ဆက်ဆက်တစ်ဦးအချည်းနှီးအတှေ့အကွုံသည်မဟုတ်, အခြားအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ကလိင် (သို့မဟုတ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်) လက်တွေ့မကြောင်းတစ်ဆွဲဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သော Over-ချထားပေးသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသယံဇာတအရင်းအမြစ်မရှိဘဲဆောင်ရွက်ရပါမည်နှင့် ကြောင်း (၎င်း၏အခ်ါရကျိုးနပ်ထက်ကျော်လွန်Shonin et al ။ , 2014c).
အခြားလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအကျင့်အကျင့်စွဲသူများနှင့် ပါတ်သက်၍ [ဥပမာပြproblemနာလောင်းကစားခြင်း]Shonin et al ။ , 2014a); စေချင်တာလေးမျိုး (Shonin et al ။ , 2014b)] နောက်ထပ် MAT စနစ်သည်ကုထုံးအားဖြင့်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများမှာ (၁) တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှိုးဆွမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုကာကွယ်ရန်စွမ်းရည်၊ (၃) ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအသိအမြင်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောအကြံအစည်များကိုယုတ်လျော့စေသောချစ်ခင်ကြင်နာမှု၊ သနားကြင်နာမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသနားကြင်နာမှုတိုးပွားလာခြင်း၊ ။
ယနေ့အထိ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သတိ၏ applications များရှာဖွေစူးစမ်းသုတေသနအတိအလင်းဥပမာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ခံစားတိုးတက်အောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ Brotto, Basson, & Luria, 2008; Brotto et al ။ , 2012) ။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်စွဲကုသများအတွက်ကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအဖြစ်သတိ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်သတင်းပို့ခြင်းဖြင့်ဒီစာပေကိုတိုးချဲ့။ အားလုံးလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်သည် Single-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေမရှိခြင်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, တွေ့ရှိချက်လိင်စွဲခံစားနေရပြီးသည်အခြားတစ်ဦးချင်းစီမှယဘေုယမပြုစေခြင်းငှါဆိုလိုသည်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းရေရှည်အပြုအမူပုံစံများပြန်ပါလာမည်မဟုတ်သကဲ့သို့လေ့လာမှုလည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရှုထောင့်အကဲဖြတ်များအတွက် 14 ရက်ကြာကာလ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အာဒံရဲ့အလားအလာကုသမှုရလဒ်များလိင်စွဲကုသမှုအတွက် MAT ၏ utility ကိုထပ်မံလက်တွေ့အကဲဖြတ်မျက်ခြေမပြတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ဤဆောင်းပါး၏အားလုံးစာရေးဆရာများလေ့လာမှုဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဆောင်းပါး၏အားလုံး contents တွေကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ထုတ်ဝေများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အုပ်စိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်လူမှုသိပ္ပံဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကထံမှကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပါဝင်သူအမည်ဝှက်ပုံစံတစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့သူတို့ရဲ့ဒေတာအတွက်အပြည့်အဝရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ကျနော်တို့ပါဝင်သူရဲ့ဖော်ထုတ်ဒေတာ / သတင်းအချက်အလက်အားလုံးအညီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီကြောင်းအတည်ပြုပါ။
American Psychiatric Association ။ (1987) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (3rd ed ။ , ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association ။
American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (5th ed ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association ။ CrossRef
စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society ။ (2011) ။ စွဲလမ်း၏အဓိပ္ပါယ်အပေါ်ပြည်သူ့မူဝါဒကကြေညာချက်။ မှရယူရန် http://www.asam.org/for-the-public/definition-of-addiction
Appel, ဂျေ, & Kim-Appel, D. (2009) ။ သတိ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ကျန်းမာရေးစွဲ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 7, 506-512 ။ Doi: 10.1007 / s11469-009-9199-z CrossRef
Baker, တီခ, Piper, အမ်အီး, ဆက်မက်ကာသီ, D. အီး, Majeskie, အမ် R. , & Fiore, အမ်စီ (2004) ။ reform စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှု: အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တစ်ခုထိရောက်အပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 111, 33-51 ။ Doi: 10.1037 / 0033-295X.111.1.33 CrossRef, Medline
Brotto, အယ်လ်အေ, Basson, R. , & Luria, အမ် (2008) ။ အမျိုးသမီးများအတွင်းလိင်စိတ်နိုးထစေသည့်ရောဂါများကိုပစ်မှတ်ထားသောစိတ်ကိုအခြေခံသည့်စိတ်ပညာပညာရေးဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 5, 1646-1659 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.00850.x CrossRef, Medline
Brotto, LA, Erskine, Y. , Carey, M. , Ehlen, T. , Finlayson, အက်စ်, Heywood, အမ်, Kwon, ဂျေ, McAlpine, ဂျေ, စတူးဝပ်, G. အ, သွန်မ်ဆင်, အက်စ်, & Miller က, DA (2012) ။ သတိပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သိမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်မီးယပ်သားဖွားကင်ဆာအတွက်ကုသသောအမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ မီးယပ်အထူးကုကင်ဆာ, 125, 320-325 ။ Doi: 10.1016 / j.ygyno.2012.01.035 CrossRef, Medline
Buysse, D. ဂျေ, Reynolds က, C. အက်ဖ်, ဘုန်းတော်ကြီး, တီအိပ်ချ်, Berman, အက်စ် R. , & Kupfer, D. ဂျေ (1989) ။ Pittsburgh အိပ်ရေးအရည်အသွေးညွှန်းကိန်း - စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်သုတေသနအတွက်ကိရိယာအသစ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန, 28, 193-213 ။ Doi: 10.1016 / 0165-1781 (89) 90047-4 CrossRef, Medline
Carnes, P. ဂျေ (1999) ။ Cybersex, လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အသွင်ပြောင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၆၊ ၇၇-၇၈ ။ Doi:6/ 77 CrossRef
Carnes, P. ဂျေ, အစိမ်းရောင်, ခအေ, & Carnes, အက်စ် (2010) ။ အတူတူပင်ကွဲပြားခြားနား: လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်ရန်လိင်စွဲစိစစ်စမ်းသပ်မှု (SAST) ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၇၊ ၇-၃၀ ။ Doi: 17 /7CrossRef
Dhuffar, အမ်, & Griffiths က, အမ် D. (2015) ။ CONSORT အကဲဖြတ်မှုကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်လက်တွေ့ကုသမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ, 2, 163-174 ။ Doi: 10.1007 / s40429-015-0055-x ကို CrossRef
Griffiths က, အမ် D. (2005) ။ တစ် ဦး biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏ '' အစိတ်အပိုင်းများ '' မော်ဒယ်။ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ဂျာနယ်, 10, 191-197 ။ Doi: 10.1080 / 14659890500114359 CrossRef
Griffiths က, အမ် D. (2012) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ, 20, 111-124 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2011.588351 CrossRef
Griffiths က, အမ် D. , Shonin, အီး, & ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ (2016) ။ လောင်းကစားရောဂါရောဂါကုသမှုအဖြစ်သတိ။ လောင်းကစားနှင့်စီးပွားဖြစ်ဂိမ်းသုတေသနဂျာနယ်, 1, 47-52 ။ Doi: 10.17536 / jgcgr.2016.004 CrossRef
Houlihan, အက်စ် D. , & ဘရူ, ဂျေအေ (2015) ။ စွဲ၏ကုသမှုအဖြစ်သတိ၏ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ။ အီး Y. Shonin, ဒဗလျူဗန်ဂေါ်ဒွန်, & အမ် Gr Griffiths က (Eds ။ ), စိတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲအတွက်အခြားဗုဒ္ဓဘာသာ - ဆင်းသက်လာချဉ်းကပ်မှု (စစ။ 191-210) ၌တည်၏။ နယူးယောက်, နယူးယော့: Springer ။
Iskender, အမ်, & Akin, အေ (2011) ။ သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်အင်တာနက်စွဲ။ ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ၏တူရကီအွန်လိုင်းဂျာနယ်, 10, 215-221 ။
Kabat-Zinn, ဂျေ (1994) ။ သငျသညျရှိ, သွားလေရာရာ၌သင်နေသောခေါင်းစဉ်: နေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ကိုဘာဝနာ။ နယူးယောက်, NY: Hyperion ။
Kafka, အမ်ပီ (2010) ။ Hypersexual Disorder: DSM-5 အတွက်အဆိုပြုထားတဲ့ရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39, 377-400 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9574-7 CrossRef, Medline
Kinsey, အေစီ, Pomeroy, ဒဗလျူခ, & မာတင်, C. အီး (1948) ။ လူ့အထီး၌လိင်အပြုအမူ။ Philadelphia တွင်, PA: WB Saunders ။
Kiresuk, တီဂျေ, & Sherman, R. အီး (1968) ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိခြင်း - ပြည့်စုံသောလူထုစိတ်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ယေဘုယျနည်းလမ်းတစ်ခု။ ရပ်ရွာစိတ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 4, 443-453 ။ Doi: 10.1007 / BF01530764 CrossRef, Medline
Lovibond, အက်စ်အိပ်ချ်, & Lovibond, P. အက်ဖ် (1995) ။ စိတ်ကျရောဂါစိုးရိမ်စိတ်စိတ်ဖိစီးမှုအကြေးခွံများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ ဆစ်ဒနီ - စိတ်ပညာဖောင်ဒေးရှင်း။
Rosenberg က, K. P. , Carnes, P. ဂျေ, & O'Connor, အက်စ် (2014) ။ လိင်စွဲမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 40, 77-91 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.701268 CrossRef, Medline
Russel, အက်စ်အက်စ်, Spitzmuller, C, Lin, အယ်လ်အက်ဖ်, Stanton, ဂျေအမ်, စမစ်, P. C. , & Ironson, G. အအိပ်ချ် (2004) ။ တိုတောင်းခြင်းလည်းပိုကောင်းနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လျှော့ချထားသောအလုပ်။ ပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်းတာခြင်း, 64, 878-893 ။ Doi: 10.1177 / 0013164404264841 CrossRef
Sahdra, ခ, Ciarrochi, ဂျေ, က Parker, P. , မာရှယ်, အက်စ်, & ကောင်းကင်, P. (2015) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ prosocial အပြုအမူ၏သက်တူရွယ်တူအမည်စာရင်းတင်သွင်းစာနာမှုနှင့် nonattachment လွတ်လပ်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်း။ စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 6, 263, Doi: 10.3389 / fpsyg.2015.00263 CrossRef, Medline
Sahdra, ခကေ, Shaver, P. R. , & ဘရောင်း, K. ဒဗလျူ (2010) ။ တွဲဖက်မှုမရှိခြင်းကိုတိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာ - ပူးတွဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအနောက်တိုင်းသုတေသနအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀ င်တစ် ဦး ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကဲဖြတ်၏ဂျာနယ်, 92, 116-127 ။ Doi: 10.1080 / 00223890903425960 CrossRef, Medline
Seegers, ဂျေ (2003) ။ ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာများ၏ပျံ့နှံ့။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 10, 247-258 ။ Doi: 10.1080 / 713775413 CrossRef
Shonin, အီး, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, & Griffiths က, အမ် D. (2013) ။ လောင်းကစားခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်။ အမူအကျင့်စွဲဂျာနယ်, 2, 63-71 ။ Doi: 10.1556 / JBA.2.2013.001 လင့်ခ်
Shonin, အီး, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, & Griffiths က, အမ် ((2014a) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူပူးတွဲဖြစ်ပေါ် schizophrenia ၏ကုသမှုများအတွက်သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT) နှင့်ဘာဝနာအသိအမြင်လေ့ကျင့်ရေး (MAT): တစ် ဦး ကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု။ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 12, 181-196 ။ Doi: 10.1007 / s11469-014-9513-2 CrossRef
Shonin, အီး, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, & Griffiths က, အမ် ((2014b) ။ Workaholism ကိုတရားအားထုတ်ရန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ကုသခြင်း။ စူးစမ်းပါ - သိပ္ပံနှင့်ကုသမှုဂျာနယ်၊ ၁၀၊ ၁၉၃၉၅ ။ Doi: 10 / j.explore.193 CrossRef
Shonin, အီး, ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, & Griffiths က, အမ် ((2014c) ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ထွန်းသစ်စအခန်းကဏ္: - ထိရောက်သောပေါင်းစည်းမှုဆီသို့။ ဘာသာရေးနှင့်ဝိညာဏ၏စိတ်ပညာ, 6, 123-137 ။ Doi: 10.1037 / a0035859 CrossRef
Sussman, အက်စ်, Lisha, N. , & Griffiths က, အမ် D. (2011) ။ အစွဲများပျံ့နှံ့ခြင်း - လူများစုပြproblemနာလား၊ လူနည်းစုလား။ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ၃၄၊ ၃၆၆ ။ Doi: 34 /3CrossRef, Medline
Traeen, ခ, Spitznogle, K. , & Beverfjord, အေ (2004) ။ နော်ဝေလူ ဦး ရေတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏သဘောထားများနှင့်အသုံးပြုမှု ၂၀၀၂ ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်၊ ၄၁၊ ၁၉၃၀၀ ။ Doi: 2002 / 41 CrossRef, Medline
ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, Shonin, အီး, & Griffiths က, အမ် ((2016) ။ fibromyalgia syndrome ရောဂါခံစားနေရသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တရားအားထုတ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း။ သတိ, 7, 409-419 ။ Doi: 10.1007 / s12671-015-0458-8 CrossRef
ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, Shonin, အီး, & Griffiths က, အမ် (2015a) ။ သတိ -based ကြားဝင်ဒုတိယမျိုးဆက်ဆီသို့။ သြစတြေးလျနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏နယူးဇီလန်ဂျာနယ်, 49, 591-592 ။ Doi: 10.1177 / 0004867415577437 CrossRef, Medline
ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, Shonin, အီး, Griffiths က, အမ်,, & Singh က, N. N. (2015b) ။ သတိတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ ဘာကြောင့်သိပ္ပံပညာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတာလဲ။ သတိ, 6, 49-56 ။ Doi: 10.1007 / s12671-014-0379-y ကို CrossRef
ဗန်ဂေါ်ဒွန်, ဒဗလျူ, Shonin, အီး, Sumich, အေ, Sundin, အီး, & Griffiths က, အမ် ((2014) ။ လက်တွေ့ကျောင်းသားများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောမှုအတွက်တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်း (MAT) - ထိန်းချုပ်ထားသောရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ သတိ, 5, 381-391 ။ Doi: 10.1007 / s12671-012-0191-5
ရေတွင်းများ, အေ (1997) ။ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏သိမှုကုထုံး: တစ်ဦးကအလေ့အကျင့်ကို manual နှင့်အယူအဆရေးရာလမ်းညွှန်။ Chichester: Wiley ။
Witkiewitz, K. , Marlatt, G. အအေ, & Walker က, D. (2005) ။ သတိ -based အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက် relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး။ သိမှုစိတ်ကိုကုထုံး၏ဂျာနယ်, 19, 211-228 ။ Doi: 10.1891 / jcop.2005.19.3.211 CrossRef
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2007) ။ ရောဂါများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြား (10th ed ။ ) ။ ဂျီနီဗာ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့။